के तपाईलाई पेटको समस्या छ ? यसरी घरेलु उपचारले ठीक पार्नुस् - USNEPALNEWS.COM
के तपाईलाई पेटको समस्या छ ? यसरी घरेलु उपचारले ठीक पार्नुस्
by यूस नेपाल न्युज संवाददाता October 12, 2019
पेट स्वस्थ हुँदा शरीर पनि तन्दुरुस्त रहन्छ । पाचन वा पेटसम्बन्धी कुनै समस्या हुँदा स्वास्थ्यका अन्य समस्या पनि आइलाग्छन् । लगभग एकतिहाइ जनसंख्या पेटको समस्याले ग्रस्त छ । यहाँ हामी घरेलु उपाय अपनाएर पेटको समस्या हटाउने उपाय बताउँदैछौं ।
पीडा नाश गर्न
पेटमा पीडा भइरहन्छ भने अलिकति रातो खुर्सानीमा सक्खर मिसाएर खाँदा पीडा हट्छ । तैपनि ठीक भएन भने चाहिँ चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।
बिहान पेट सफा भएन भने दिनभरि शरीर भारी हुन्छ । पेट सफ ागर्नका लागि एक चम्चा बेकिङ सोडालाई एक गिलास पानीमा हालेर पिउनुस् । बिहान कब्जियत हट्छ ।
पेट स्वस्थ राख्ने नियम
पेट स्वस्थ राख्नका लागि खानपान सही हुनुपर्छ । बिहान उठेर खाली पेट पानी पिउनुस् । दिउँसोको खाना खाएपछि लस्सी र राति खानापछि दूध पिउँदा पनि पेट स्वस्थ रहन्छ ।
पाचनक्रियामा गडबडी हुँदा भोक कम लाग्छ । यस्तो हुँदा अलिअलि बेरमा कालो नून चाट्ने गर्नुस् । अनि सर्स्युँको तेलमा बनाएको खाना खाने गर्नुस् । यसले पाचन क्रिया राम्रो बनाइदिन्छ ।
पेटमा एसिड बन्ने कुराहरू बिहानीपख नखानुस् । मसलायुक्त भोजन, अमिलो फल, सोडा, रक्सी, कफी र चिया बिहान नपिउनुस् ।
अमला पेटका लागि रामवाण हो । दिनदिनै एक कप पानीमा दुई चम्चा अमलाको रस हालेर पिउनुस् । अमलाको सेवनले शरीरमा रहेका विषालु तत्त्व पनि निस्केर जान्छन् अनि पेट स्वस्थ रहन्छ ।
भोजनमा फाइबरयुक्त खानेकुरा समावेश गर्नुस् । टुसा उम्रेको अनाज, फल र जुसले शरीरलाई पोषक तत्त्व पनि दिन्छन् र पेट पनि सफा राख्छन् । अनि फाइबर खाँदा मोटोपन पनि कम हुन्छ ।
पोखरामा खेल पर्यटनमार्फत समृद्धि : मन्त्री विश्वकर्मा
प्रधानमन्त्री देउवाले भने :एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयन गर्छु